Palmyra, chishamiso chegwenga reSyria | Kufamba Nhau
Enric Gili | | General, Chii chekuona, Siriya
Nhasi ndiri kuzokuudza nezveimwe yenzira dzinonakidza dzandati ndamboita, Palmyra. Rwendo rwunogona kutorwa serwekunze uye izvo izvozvi hazvigoneke nekuda kwekurwiswa kwegandanga munzvimbo iyi. Iri nezveguta rekare rePalmyra, matongo anoshamisa ezvekuchera matongo mugwenga reSiria.
Palmyra yakaziviswa saNyika Heritage Nzvimbo muna 1980. Inowanikwa pakati perenje uye padyo ne oasis, ndiyo imwe yeiyo yakakosha matongo ekuchera matongo ayo achakachengetedzwa zvisinei nekurwiswa neDAESH (Islamic State) uye kuratidzwa kwese kwetsika uye nguva dzaigara nzvimbo iyi mukati memazana emakore.
Zvimwe zviwanikwa zvekuchera matongo zvinoratidza kuvambwa kweguta rakatenderedza mireniyamu yechipiri BC uye zvasara kubva kuNeolithic zvakawanikwa.
Hondo yevagari vemo uye ISIS isati yarwiswa, Palmyra yaive imwe yenzvimbo dzakanaka kwazvo kuMiddle East neSyria.
1 Ungasvika sei kuPalmyra?
2 Chii chekuita muPalmyra?
Ungasvika sei kuPalmyra?
Chokwadi mubvunzo wekutanga unofanirwa kunge uri "Zvinoita here kuenda kuPalmyra izvozvi?" uye mhinduro inganzi HAPANA. Izvo zvakanaka kuti uishanyire kana paine runyararo mudunhu.
Kunyange zvakadaro, kusvika kuPalmyra zvinongogoneka kuzviita nemugwagwa, nemotokari kana nebhazi. Mugwagwa unobatanidza zvakananga guta guru reSyria Dhamasiko ine Palmyra, iri pamusoro pe220Km uye anenge maawa mana ekufamba. Ini handizive mutengo wekuita rwendo netaxi, iwe unogara uchifanira kuita haggle.
Kunyangwe iri inonyanya kukosha nzvimbo yevashanyi munyika, ini Ini ndinokurudzira kufamba nesangano uye gwara, chinhambwe chakareba uye mazhinji emaposta ari muchiArabic.. Kune akati wandei mahotera ekugara ipapo.
Ihotera yakanakisa ndeyeZenobia Cham Palace, iyo yega iri pamberi chaipo pematongo uye yakavakwa muna 1930 nevaEuropean, Countess Marga D'Andurain nemumwe wake Pierre Hotera inoyevedza, mutengo unogamuchirwa, kurapwa kwakakodzera uye nyaya yakakodzerwa nenano dzakanakisa. Ikoko iwe unogona kuwana nei.
Chii chekuita muPalmyra?
Matongo aripo padyo padyo neguta razvino rine zita rimwe chete uye vane kuwedzera kwakanyanya. Mazhinji acho anogona kushanyirwa netsoka, asi kune mamwe matongo (mariro eshongwe) ari panzvimbo dzakakwirira kana dziri kure dzinoda mota kuti isvike ipapo.
Palmyra haina kumira nechinhu chimwe kunyanya, ndiyo yese seti. Guta rese rakachengetedzwa chaizvo nemazana emakore iro raakavakwa, hondo, kuvhozhokerwa uye nenguva dzaakararama.
Ndinokurudzira kuti ubve muhotera mangwanani-ngwanani uye utange kufamba-famba mumatongo ekuchera matongo. Muzhizha tembiricha inogona kusvika 40ºC, kuunza mvura uye mbatya dzakanaka kuti ufambe. Shanyira guta rose rekare mangwanani uye masikati kana masikati enda kuMupata weMakuva. Kana iwe uine nguva ini ndinotorawo kufamba kuburikidza neguta razvino rePalmyra.
Izvo zvakati, hatigone kusiya Palmyra tisina kuona zvinotevera:
Tembere yaBel (kana Bhaari): nguva yakashandurwa kuita kereke yakatsaurirwa kunamato yaBel, mwari mukurusa weMesopotamia, uye yakavakwa muna 32 AD Yakaparadzwa naDAESH. Pamberi pekurwiswa kwaionekwa senge yakachengetedzwa kwazvo tembere muPalmyra. Iye zvino vari kuivaka zvakare.
Matembere aBhaarshamin, Nabu, Al-lat naBaal-Hamon, inowanikwa mukati meguta uye yakavakwa pakati pezana remakore rechipiri nerechipiri mushure maKristu.
Main axis yeguta: inoyevedza colonnade inopfuura 1km iyo yakashanda semugwagwa mukuru wePalmyra kubva muzana ramakore rechipiri AD uye waishandiswa nevagari vemo, vatengesi nevamwe. Ndiwo zvirokwazvo unonyanya kuzivikanwa mufananidzo weguta rino munyika.
Yemitambo yeRoma: ndeimwe yemitambo yeRoma yakachengetedzwa pasi rese. Yakavakwa muzana ramakore rechipiri AD, apo Palmyra yaive pasi pehutongi hwehushe hweRoma.
Mupata wemakuva: mashoma km kubva kuguta rekare uye padyo nemakomo shongwe dzinoverengeka dzemariro dzinokwira. Imwe yacho iElahbel tower, kubva muzana ramakore rekutanga AD, uye munzvimbo yakakwana yekuchengetedza. Iwe unogona kushanyira mukati mayo uye uone iyo inonakidza yekuvaka uye pendi.
Kamwe rugare parunodzoka muSyria, ini Ndinokurudzira kuti uende kuPalmyra pasina mubvunzo.
Ndakave nerombo rakanaka rekumushanyira hafu yegore Hondo yevagari isati yatanga. Panguva iyoyo nyika yaiita kunge iri kuvhurira nyika, makambani mazhinji ekuMadokero aive ave kutanga kuvepo muSyria. Zvakandipa kunzwa kwekuti vanhuwo zvavo vaifara nemamiriro ezvinhu munyika uye vaifarira kuti kushanya kwakatanga kushanya. Zviripachena ini ndakasiya ndiine manzwiro asina kukodzera chokwadi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » famba » Chii chekuona » Palmyra, chishamiso chegwenga reSyria
Nzvimbo dzakanakisisa dzevashanyi muBenidorm